ABAPHINDEZELI: UMDLALO WOKUGQIBELA, IMFAZWE ENGAPHELIYO IBULALE ABAFAZI BEMPAWU ZEMARVEL - UMPHINDEZELI WOKUGQIBELA
Ioveni Ebhaka Lula
Busi Ndibanqumle Abantwana
In abaphindezeli: Imfazwe engapheliyo kunye ne-Endgame, iMarvel ibulala abafazi bayo beMpawu
ubuhle bobugqwirha nerhamncwa
** Abaphangi ngeeMarvel's Abagibeli: Umdlalo wokugqibela. **
Nini Ababuyisi Sixhiba yaphuma ngo-2012, yayiyifilimu yokuqala yeqela elimangalisayo likaMarvel, kwaye ekuphela kwelungu labasetyhini kweli qela litsha lamagorha yayinguNatasha Romanoff / Umhlolokazi Omnyama (uScarlett Johansson). Ifilimu yesibini yokumanyaniswa kweMarvel yeza ngo-2014 nge Abagcini beGalaxy , Kwaye kwakhona, iqela lalinomfazi omnye wethokheni: UZoe Saldana njengoGamora. Kwakucaphukisa ukuba bambalwa abalinganiswa ababhinqileyo abavunyelwe kwiklabhu yamakhwenkwe eMarvel, kodwa uMhlolokazi Omnyama noGamora ubuncinci babalinganiswa abaphambili. Babengoobubi, abalinganiswa abaqaqambileyo, kwaye ukubangabajikelezileyo kwakuthetha yonke into ngelixa sonke sasilinde uMarvel ukuba enze isenzo kunye kunye nokongeza abanye abantu basetyhini ekubunjweni kwayo.
Ke ithini into yokuba uMarvel ubabulele bobabini aba bafazi kwezi zimbini zidlulileyo Abaphindezeli Iimuvi — iGamora kwi Abaphindezeli: Imfazwe engapheliyo , noMhlolokazi Omnyama Abagibeli: Umdlalo wokugqibela ? Abafanga bobabini kuphela, kodwa ngendlela efanayo: benziwa idini ukuze omnye umntu (oyindoda) alifumane ilitye lomphefumlo. Ngoku jonga, ndiyazi ukuba uNatasha noGamora babengengabo abalinganiswa ababini ababingelelwe kwezi bhanyabhanya. Umbono (Paul Bettany) wabulawa kabini ngenxa yelitye lakhe lengqondo Imfazwe engapheliyo , Kwaye Iron Man (URobert Downey Jr.) wazincama ngokwakhe ukuze asindise indalo iphela Igama lokugqibela , Kodwa eyona nto yile, nangaphandle kwabo babini, uMarvel usenamalungu amaninzi abesilisa ashiyekileyo kuluhlu lwabo. Xa bambalwa abantu ababhinqileyo kwiimuvi zakho, ungababulala njani abo unabo?
Inyani yento kukuba besingenakukwazi ukulahlekelwa ngumhlolokazi omnyama kunye noGamora, kodwa yenziwa mandundu ngakumbi yindlela abasweleke ngayo. Ukuzincama yinto eyoyikisayo neqhelekileyo yabalinganiswa ababhinqileyo. Nokuba bakhetha ukubingelelwa, njengoNatasha, okanye bayanyanzelwa, njengoGamora, xa siqhele ukubingelela abantu basetyhini, sithi abafanelwe kubakhona njengabanye, ngesiqhelo abesilisa, abalinganiswa. Inika umbono wokuba ekuphela kwento ekufuneka yenziwe ngabasetyhini kukubeka wonke umntu phambili, kwaye ekuphela kwendlela yokuba mkhulu ngokwenene kukuthatha oko kugqithise kwaye kufele abanye-eyona nto inokubonwa ngabasetyhini kukufa. Sivuselela ukubhubha kwabo kwaye siwaxabise ngaphezu kobomi babo. Njengesixhobo sebali, oku kuhlala kusetyenziselwa ukuqhubela phambili ibali lomlingiswa oyindoda, i-tridging trope ebekiweyo.
kutheni iinwele eziorenji zibizwa zibomvu
Sibona okuninzi koku kudlalwa kwindawo nganye kaGamora kunye nokubhubha kukaNatasha. UGamora ngoyena mlinganiswa uThanos (Josh Brolin) abonakala ekhathalele ngokwenene. Iimpawu zakhe kunye naye, ngakumbi njengomntwana, zisetyenziselwa ukwenza ubuntu ku-Thanos kwaye zimnike ubumnandi bokuntsonkotha. Oku kumenza abe yinto ayithandayo, ekufuneka eyincamile, yomelele ngakumbi. Ludaba olunomdla olunyanzelekileyo, ngaphandle kwamathandabuzo, kodwa oko kuthetha ukuba iarc yonke yeGamora in Imfazwe engapheliyo malunga negalelo kumlingiswa ka-Thanos kunye ne-arc yakhe, hayi eyakhe.
Nokuba ungamxolela uJoe noAnthony Russo, abalawuli bazo zombini iifilimu, ngendlela uGamora aphume ngayo, eqiqa ngelithi yayiyinto efanelekileyo yesakhiwo kule meko, kunzima kakhulu ukwenza izizathu zokufa komhlolokazi omnyama. Kwimbonakalo yokugqibela yobuhlobo, uHawkeye (uJeremy Renner) kunye noNatasha bayikhuphela ukuba ngubani oza kuba ngulowo utsibela eweni kwaye azincame ukuze afumane ilitye lomphefumlo kwaye asindise umhlaba. Ngomzuzwana wokugqibela, uNatasha uyaphumelela, kwaye uwela ekufeni kwakhe. Ukuba ibilula ngoluhlobo — abahlobo ababini abasenyongweni abazama ukuhlangulana — ibingazukuba mbi kangako.
Ngaphandle. Isizathu sokuba umhlolokazi omnyama asinike isizathu sokuba afe kuye kukuba akanalo usapho, kwaye ke, kufanelekile ukuba aphile kancinci. Ubomi bomfazi abuxabisekanga kancinci ngenxa yokuba engenamlingane okanye bantwana. Kwi Abaphindezeli: Ubudala be-Ultron (2015), uJoss Whedon, umlawuli, wenza isigqibo ngelishwa lokuba uNatasha akholelwe ukuba usisikhohlakali sokungazali-into eyanyanzelwa yiKGB kuye.
Emva kokudala eli nqaku libi, iMarvel bekufanele ukuba ubuncinci ibenze ukuba bafumane umvuzo ophucukileyo. Ukuba umhlolokazi omnyama waqonda ngexesha lakhe njengoMphindezeli ukuba kufanelekile ukuba aphile kulo Mhlaba njengaye nawuphi na omnye umntu, ibali elinokuba belilungile. Kubonakala ngathi iiRusso zazikulo mzila xa zisalathisa UCaptain America: Ijoni lasebusika (2014), ifilimu yabo yokuqala yeMarvel. Kuvakala ukuba, kule filimu, ngathi uyaqonda ukuba nangayo yonke into embi ayenzileyo, usenento anokuyilwela. Kwi Igama lokugqibela , nangona kunjalo, balahla nje loo nto. I-Hawkeye ngokucacileyo ixabiseke ngakumbi njengophawu kuba inosapho lokubuyela kulo.
Ababuyisi Sixhiba babenjalo usapho lwakhe, nangona, kwaye emva kwalo lonke eli xesha, bendifuna ukumbona ebamkela ubomi bakhe kwaye ndiziva ndikulungele ukuthatha indawo emhlabeni. Ngaphandle kokuba uClint abe nosapho, akukho sizathu sokwenyani sokuba aphile endaweni yakhe. Indima yakhe kwenye ifilimu ayibalulekanga. Isenzo sakhe lula ukuba kwenziwe omnye umlinganiswa. Umhlolokazi omnyama ngewayephile phezu kwakhe, kwaye ngekhe konakalise iyelenqe lomdlalo bhanyabhanya. Kwaye besimdinga kakhulu kwifilimu eseleyo, kuba xa sele eswelekile, kwaye uNebula (uKaren Gillan) uthathelwa indawo bububi-odlulileyo-uNebula, kukho kuphela amadoda egumbini.
igumbi lerubhi steven
Kwabo bacelayo: uthini malunga nomdlalo bhanyabhanya omnyama womhlolokazi omnyama? Ndicinga ukuba izakuba yinto yokuqala ngoku sele eswelekile, kwaye ngelixa kumnandi ukuba uMarvel ekugqibeleni anike umlingiswa ifilimu eyedwa-enye abalandeli bebeyicela iminyaka elishumi-ayitshintshi ukuba umlinganiswa uphumelele ' Ndifumana ithuba lokukhula kunye nokukhula kwikamva le-MCU. Ngokubhekisele kwiGamora, sonke kuyakufuneka sijongane neyesithathu Abagcini bhanyabhanya ngaphandle kwakhe-okanye ubuncinci inguqulelo yakhe esiyaziyo, njengoko Elinye iqela lisenokukhangela ingxelo yalo ka-2014 -Filimu iya kuba ngaphantsi kuyo. Ikwathetha, ukuthintela nabaphi na abalinganiswa abatsha, oko Abagcini ibuyele ezantsi kumfazi omnye ongumqondiso kwiqela labo okwangoku, eMantisis (Pom Klementieff).
Umhlolokazi omnyama kunye neGamora bekufanele ukuba zii-unicorn. Olunye uhlobo, abalinganiswa ababukhali ababhinqileyo ababevunyelwe ukudlala namakhwenkwe. Xa sasingenaye omnye umntu, sasinabo, kwaye abalinganiswa babo babengaphoxi; zazingakholeleki. Ngokubabulala bobabini, kwaye ngendlela efanayo, kubonakala ngathi uMarvel uthi, Awunakho nokuba uthathe abambalwa ababhinqileyo ababhinqileyo esikunike bona, kuba asinangxaki ukubalahla.
Ngaba bebesazi, xa begqiba kwelokuba bababulale bobabini ngoluhlobo, ukuba bazokwenzakalisa abalandeli babo ababhinqileyo, okanye ngaba bebengakhathali? Ngelishwa, Imfazwe engapheliyo kwaye Igama lokugqibela ngqina ukuba iRusso, kunye neMarvel Studios xa iyonke, okwangoku ababoni abalinganiswa ababhinqileyo njengabalinganiswa abagcweleyo ababalulekileyo nabafanelekileyo, kwaye oko kuthetha yonke into malunga noko bakucingayo ngabasetyhini.
(umfanekiso: Ukuzonwabisa kweMarvel)
Kutheni uMichael Myers emva koLaurie
U-Linda Maleh ngumbhali wezolonwabo ozimeleyo wase-New York, egxile kumabonakude nakwifilimu. Ungumnikeli weForbes kunye neMidlalo yeNerds, kwaye une-bylines eBustle, Polygon, Collider, nakwi-NY Blueprint. Ungumntu onekratshi kunye nobufazi othanda amagorha, iphupha, kunye nembali yamaxesha aphakathi. Ngaphezulu komsebenzi wakhe, landela @iqosweb kwi-Twitter, kunye nephepha TV2Talk Malunga kufacebook.
Iindlela ezi-8 endiye ndaba nguMlingo ongcono: Ukuqokelela umdlali we-EDH
I-X-Files Newbie Recap: Ixesha le-9 kwaye ndifuna ukukholelwa
Ii-90 ZIBUYILE! X-Men '92 Iza Digital Comics
irhamncwa elikwibhokisi yeentaka
Piper perabo cingela mna nawe
mrs indlu engaphantsi kwamakhadi
Iliwa elineminyaka eli-15 ubudala
I-sonic mania eyenziwe ngabalandeli
Ibhiya eyi-duff yokwenyani iyathengiswa